प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे के गर्दै छ सरकार ? नामको विषयमा सोमबारदेखि छलफल – Peacepokhara.com
प्रदेश प्रमुख नियुक्तिबारे के गर्दै छ सरकार ? नामको विषयमा सोमबारदेखि छलफल
काठमाडौं १८ पुस । सरकारले केही दिनभित्रै सातवटै प्रदेश प्रमुख तोक्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा लामो समय किचलो भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेकी छिन् । सरकारले अब निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति घोषणाका साथै प्रदेश प्रमुख र उनीहरू बस्ने प्रदेश केन्द्र तोक्ने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले प्रमुख तोक्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने मितिका लागि छलफल गरेर दिन सजेस्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ । आयोगसँगको परामर्शअनुसार तीन–चार दिनभित्र मिति तोक्ने भन्ने भएको छ,’ परियारले भने, ‘अब सोमबारदेखि प्रमुख तोक्नेबारेमा छलफल हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको मिति घोषणा र प्रदेश प्रमुख तोकिन्छन् ।’
यसअघि एमालेले प्रमुख तोक्नुहुँदैन, हाम्रा सांसदले शपथ खाँदैनन् भनेर अनावश्यक अडान लिएपछि सरकारले समयमा गर्न नसकेको खाण बताउँछन् । ‘एमालेले सरकारले तोकेका प्रमुखसँग हाम्रा सांसदले शपथ खाँदैनन् सम्म भनेका विषय मिडियामा आए,’ खाणले भने, ‘यसैले ढिलाइ भएको हो । अब प्रदेश सभाको पूर्णता र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभाको पूर्णतापछि नयाँ सरकार निर्माणले गति लिन्छ ।’ नयाँपत्रिकाले छापेको छ ।
मुख्य सचिव र सचिवका गाडीलाई ट्राफिकले रोक्न नपाउने !
टहरोमा बास, टहरोमै एसएलसी परीक्षा
peacepokhara 31 Mar 2016